Madasha Xisbiyada Qaran oo war ka soo saaray xaalada siyaasaded ee gobolka Gedo - Awdinle Online
Madasha Xisbiyada Qaran oo war ka soo saaray xaalada siyaasaded ee gobolka Gedo
February 15, 2020 (Awdinle Online) –Madasha Xisbiyada Qaran ee uu hogaamiyo Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa Caawa War kasoo saaray xaaladda ka jirta Gobolka Gedo.
War-saxaafadeedka kasoo baxay Madasha Xisbiyada ayaa waxaa lagu sheegay in Madasha bilihii ugu dambeeyay si dhow ula socotay xaalada murugsan iyo dhiilada colaadeed ee ka jirata Gobolka Gedo.
Madasha ayaa tacsi u diray qoysaska Ciidankii dhawaan ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay Degmada Bedel-Xaawo, kaasi oo u dhexeeyay Ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwo ka tirsan Jubbaland.
Sidoo kale Qoraalka ay soo saareen Madasha Xisbiyada ayaa Madaxweynaha iyo Xukuumadda waxaa ay ku eedeeyay inay Ciidamo gaar ah ku daabuleen Gobolka Gedo, iyagoo kaashanaya Ciidamo Itoobiyaan ah oo aan kamid aheyn howlgalka AMISOM.
Qoraalka Madasha ayaa waxaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin in Agaasimaha Hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA Fahad Yaasiin uu burburiyay qaab dhismeedkii Ciidamada Qalabka Sida ee Dastuuriga ahaa.
Ugu dambeyntii Madasha ayaa Odayaasha dhaqanka iyo Waxgaradka Gobolka Gedo ugu baaqday inay u istaagan in howlaha dowladda ka wado Gobolka aysan isku bedelin dagaal beeleedyo.
Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran.
Previous articleWarshad ku taalla Duleedka Muqdisho oo dab qabsaday.
Next articleKoonfur Galbeed oo Yeelan Doonta Baarlamaan Cusub